The Escapists: Prison Escape 1.1.5.556924 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.5.556924 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ The Escapists: Prison Escape
The Escapists: Prison Escape ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ Escapists, သင်ရာဇဝတ်မှုပြုမိပါဘူးဒါပေမယ့်သင်ကအချိန်ရှင်သန်နှင့်ပွုနိုငျသနညျး အဆိုပါ Escapists သင်အရက်ဆိုင်များနှင့်ဆူးဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးနောက်ကွယ်မှတစ်ဦးဘဝတွေ့ကြုံခံစားရဘယ်မှာထူးခြားတဲ့ထောင်ထဲမှာထွက်ပေါက် sandbox 'ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဘဝဖူးပေမယ့်ယခုသင်တို့ကိုဘမ်းပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့် immersive ဂိမ်းနှင့်အတူ, သင်သည်အခြားအကျဉ်းသားတစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ဦးထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းဖန်တီးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကအုပ်ချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လိပ်ခေါ်ဆိုမှုမှအလင်းအိမ်ထွက်, သင်တက် banged ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာထောင်ဒဏ်အခမဲ့ကဒ်ထဲကအဘယ်သူမျှမ get သငျသညျအထဲကကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှိပါတယ်။ သင်စိန်ခေါ်မှုတက်သည် Are သို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့ဆဲလ်ရှိထိုင်သွားကြသလဲ သငျသညျအထဲကတွေဆီကနေအားလုံးကိုသင့်ရဲ့တစ်သိန်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလိုပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမရိုးကိုသငျသညျလွတ်မြောက်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, သင်ကိုင်သွားကြသည်!
အဆိုပါအစောင့်များ၏သတိထားစောင့်ကြည့်အောက်မှာနေစဉ်, သင်ကသူတို့နှာခေါင်းအောကျမှအသုံးဝင်သောအရာဝတ္ထုပွတ်ဆွဲရန်မဟာဗျူဟာနှင့်ရဲကိုအသုံးပြုဖို့အနေဖြင့်အကျဉ်းထောင်ဘဝကိုဖို့အသုံးပြုရရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးရန်ပွဲများတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ကောက်ကျစ်ထွက်ပေါက်အစီအစဉ်များအဘို့အတူးရွင်းပြားသို့မဟုတ်နေရာလေးကိုလက်နက်များနှင့်တူအသုံးဝင်သော tool များကိုသို့အပြစ်မဲ့ရှာဖွေနေပစ္စည်းများလုပ်ပါ။
ESCAP ကောက်ကျစ်, နည်းဗျူဟာ, ဖြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်ပြီးလာမည့်အစောင့်အနည်းဆုံးနှစ်ခုခြေလှမ်းများတည်းခို။ လာဘ်ထိုးခြင်းနှင့်အကျဉ်းထောင်ရာထူးအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းကိုစစ်တိုက်ခြင်း။ သင်၏အပေါင်းအဘော်အကျဉ်းသားအလုံအလောက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ထိုသူတို့ကိုစုဆောင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂိုဏ်းဖန်တီးပါ။ သငျသညျပင်အကျဉ်းထောင်ကျော်ယူခြင်းငှါ,! အဆိုပါအစောင့်ဆိုထွက်ပေါက်ကြိုးစားမှုရပ်တန့်ဖို့ထွက်ဖြစ်ကြသည်, ဒါသင်, လိပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတက်ရောက်ခြင်းတစ်ဦးအကျဉ်းထောင်မှအလုပ်လုပ်ဆောင်နေနှင့်သင့်ခိုးယူကုန်ခိုးသွင်းခိုးထုတ်ခြင်းပုန်းအောင်းနေဖြင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူကိုရှောင်ရှားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Escapists ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေများစွာထွက်တွေဆီကနေရန်သင့်အားစိန်ခေါ်တဲ့စိတျလှုပျရှားစရာ sandbox 'မဟာဗျူဟာထောင်ထဲမှာ Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခမဲ့ချိုးဖျက်ဖို့လိုခငျြသျောလညျးသငျထ banged နေနှင့်သင်လွတ်မြောက်ရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ် သင်ရှင်သန်ပြုသင်မည်သို့အထိဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင့်ရဲ့ဆဲလ်ထဲကနေသည့်အခါ, တစ်ဦးတင်းကျပ်နေ့စဉ်အချိန်ဇယားလိုင်း၌သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်တစ်နေ့တာအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်အလုပ်အကိုင်များတစ်ဦးမှာလုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။
•ကိုစှဲထောင်ထဲမှာ Simulator ကိုဂိမ်း, သင့်ဆဲလ်ထဲကတစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖို့သူတို့ကိုအသုံးပြုဇွန်းနှင့်ချိတ်ခိုးယူ။
•6အခြေတည်အကျဉ်းထောင်ကျော်, နိမ့်ဆုံးလုံခြုံရေးအကျဉ်းသို့မဟုတ် Alcatraz နဲ့တူကွောကြီးတွေအိမ်များထံမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
•သင့်ထွက်ပေါက်အကူအညီသောင်မတင်ပေါင်းစပ်များစွာဖန်တီးပေးရန်, Find ကိုခိုးယူနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ
•သင်ပြွန်တိပ်တစ်ဝက်အူလှည့သို့မဟုတ်လက်သည်းဖိုင်တွေလိုပါလိမ့်မယ်, အတူ swag ကုန်သွယ်မှုတခြားအကျဉ်းသားကိုရှာပါ။
• Dodge ကုန်ခိုးသွင်းခိုးထုတ်ခြင်း detectors အ။ သင်သည်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှာကုန်ခိုးသွင်းခိုးထုတ်ခြင်းနှင့်အတူတဦးတည်းဖြတ်သန်းလျှင်, အပူမီတာ 99 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်။
•သံမဏိထောင်ထဲမှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အတူတံခါးများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနောက်ကွယ်တွင်အသက်တာ Adapt နှင့်ဂိမ်းရဲ့ခြောက်လထောင်တွေမှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်, စိန်ခေါ်ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသုံးအပိုအကျဉ်းထောင်ရှိပါတယ်။
•ရှင်သန်နှင့်သင့်ခွန်အားကိုမြန်နှုန်းနှင့်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းထည့်ပါ။ သင်ရုံသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ them.t လိုအပ်ချက်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်ထွက်ချိုးမှလွတ်မြောက်ရန်မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Escapists ရုံထောင်လိုပဲခက်ခဲတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်မှန်ထောင်နံရံအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးနိုင်သလား? သို့မဟုတ်ပင်သင်၏အဘမ်းသွားချုပ်နှင့်အတူရောနှောနေခြင်းမှတစ်ဦးကိုယ်ရံတော်ယူနီဖောင်းကိုခိုးယူ? စွဲလမ်းနှင့်တင်းမာနေသောကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကဉျြးထောငျမှလွတ်မြောက်ရန်အမှန်တကယ်စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ အနည်းငယ်အတွင်း၌ပြစ်မှုကျူးလွန်, ရှာတွေ့ခိုးယူခြင်းနှင့်ခိုးသွင်းရန်ပစ္စည်းများများစွာရှိပါသည်။ တချို့ကသင်ပိုမိုအသုံးဝင်သောဂီယာများအတွက်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးနိုင်ပါတယ်ကုန်ခိုးသွင်းခိုးထုတ်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။ လိမ္မာပါးနပ်ယာယီလက်နက်နှင့် tools တွေကို Create တစ် SOCKS အတွက်ဆပ်ပြာတစ်ဘားတစ်ဦး fistfight အတွက်အသုံးဝင်သည်။
သင်၏အပေါင်းအဘော်ကိုအကျဉ်းသားများထံမှဝယ်ယူသို့မဟုတ် "ချေး" ကုန်ကြမ်းယာဉ်ကိရိယာများနှင့်ဝါယာကြိုးများကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများ, အရောင်ချွတ်အရောင်တင်တဲ့ပုလင်း, ကျွန်းသစ်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း, ချောကလက်တစ်ဘားတစ်ဦးပလပ်စတစ်ဖြီးနှင့်အများကြီးပိုရန်အသုံးပြုကြသည်။ သငျသညျအလုံအလောက်စမတ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏လွတ်မြောက်စေရန်နည်းလမ်းများထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦး pickaxe, ဝါယာကြိုးခုတ်, ဇစ်လိုင်းတွေနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်တွေ့ပါနှင့်သင့်ဆဲလ်ထဲကရရှိရန်သုံးစွဲဖို့ပစ္စည်းများကိုများစွာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Escapists ထောင်ဒဏ်ထဲကချိုးဖျက်ဖို့သငျသညျစိန်ခေါ်တစ်ခုစွဲလမ်းမဟာဗျူဟာထောင်ထဲမှာ Simulator ကိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး Escapist ဖြစ်, တစ်အကျဉ်းသားဖြစ်မနေပါနဲ့!
ယနေ့အဆိုပါ Escapists Download ပြုလုပ်မယ့်ရာဇဝတ်မှုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတခုထွက်ပေါက်အစီအစဉ်ရှိမဟုတ်လျှင်, သင်ထွက်စစ်ဆေးလို့မရပါဘူးနှင့်သင်စွန့်ခွာဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ် ...
The Escapists: Prison Escape အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
The Escapists: Prison Escape အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
The Escapists: Prison Escape အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
apk-4-free စတိုး 332.25k 92.39M
The Escapists: Prison Escape ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း The Escapists: Prison Escape အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.5.556924
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.team17.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: 56:2D:D4:11:A6:D9:69:FD:94:0A:D4:0C:C7:BF:47:61:31:FF:73:F0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Team17
အဖွဲ့အစည်း (O): Team17
နယ်မြေ (L): Wakefield
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Yorkshire
The Escapists: Prison Escape APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ